Ubuntu Cinnamon Remix iya kukhupha ingxelo "epheleleyo" ngoJanuwari | Ubunlog
Ubuntu Cinnamon Remix iya kukhupha ingxelo "epheleleyo" ekuqaleni kuka-2020, kodwa sinokuyivavanya kwangoko.
IPablinux | | Ubuntu
Kubonakala ngathi indlela eya kusikhokelela ekubeni sonwabele incasa entsha yoBuntu ayinamatye amaninzi endleleni. Yinto yokuqala endiyicingileyo xa ndifunda ii-tweets zokugqibela zeakhawunti ye-Ubuntu yeCinnamon, inkqubo yokusebenza engakakubonanga ukukhanya kwaye, xa ikwenza, iyakwenza njalo phantsi kwegama Ubin Cinnamon Remix. Kuyabonakala ukuba, iyakwenza njalo kwakamsinya kunokuba bekulindelwe, ubuncinci kuguqulelo oluya kusinceda ukuba sifumane umbono malunga nokuba uBuntu uya kuba yintoni nencasa yesinamon.
Itswirlz, Umsunguli weprojekthi, uthi uhlobo lwetyala alulungisayo izakufika ngaphambi ko-Ubuntu 19.10 Eoan ErmineOko kuthetha ukuba siya kukwazi "ukungcamla" kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezintathu. Ukuthathela ingqalelo ukuba uguqulelo "olupheleleyo" luya kukhutshwa kwiinyanga ezintathu ukuya kwezine kamva, sinokucinga ukuba into esiza kukwazi ukuyivavanya malunga neentsuku ezili-15 iyakufana neDaily Build, hayi kakhulu kuhlaziyo lwayo lwemihla phawula kwinqanaba lokuphuhlisa.
Ubuntu Cinnamon Remix iza ngoJanuwari
Molo apho. @ZeeSwirlz Apha, iNtloko yeprojekthi. Ndifuna nje ukushiya uhlaziyo olungemva kwamakhethini.
Siza kuba nolwakhiwo olukulungeleyo phambi kokukhutshwa kwe-19.10 Eoan Ermine (ngaphandle kokuba sinomcimbi, ongenakulindeleka ukuba wenziwe, enkosi @UbuntuBudgie Uncedo)
-Ubuntu Cinnamon (@UbuntuCinnamon) Septemba 29, 2019
Mholo. Ndiyi-ItzSwirlz, umphathi weprojekthi. Ndifuna nje ukushiya ezinye uhlaziyo emva kwamakhethini. Siza kuba nohlobo lovavanyo olulungele ngaphambi kokukhutshwa kwe-19.10 Eoan Ermine (ngaphandle kokuba sinengxaki, engenakwenzeka, enkosi ngoncedo lukaBuntu Budgie).
Nabani na onceda ukwenza yonke into ihambe ngokukhawuleza kukugqibela ukufikelela ngokusemthethweni kusapho lakwa-Ubuntu, oko kukuthi, iqela le- Ubuntu Budgie. Ngoncedo lwakho, umsunguli weprojekthi ye-Ubuntu Cinnamon uthi kuyakubakho "ugcwele" uguqulelo lwenkqubo yakhe yokusebenza phakathi ku-Februwari kutshanje, esiqonda ukuba kuya kuthetha ukuba kuya kubakho ingxelo ezinzileyo kwiinyanga ezintathu ukuya kwezine.
Ngokubhekisele kwiphepha labo lewebhu, kubonakala ngathi siza kuba nakho ukuyibona emva kokubona inkqubo yokusebenza, kuba bayiphawule njengethagethi. ifumaneka ngeHalloween. Kuya kubakho ezinye iindawo ezingenanto kude kube kukhutshwe uhlobo lovavanyo lwe-Ubuntu Cinnamon Remix, kwaye kuya kufuneka ndivume ukuba okwangoku ndilahlekile: ukuba banalo uvavanyo lwetyala phambi kuka-Eoan Ermine (nge-17 ka-Okthobha), oku kufanele kufike ngaphambi kokuba bavule iwebhu (Novemba 1), akunjalo?
Ngayiphi na imeko, bayaqonda ukuba basenomsebenzi omninzi phambi kwabo kwaye kufanelekile ukuba sibe nomonde. Ndicinga ukuba ngeyona ndlela ibhetele kuya kubakho ingxelo efanelekileyo ngo-Epreli 2020 kwaye ayisayi kuba yincasa esemthethweni kude kube ziinyanga ezi-6 okanye unyaka emva koko. Nokuba kwenzeka ntoni na, siza kukwazisa kwakamsinya nje emva kokuba ingxelo yovavanyo ikhutshiwe.
Ubudlelwane phakathi kwe-Ubuntu Cinnamon kunye neLinux Mint buya kufana nobukaKubuntu kunye ne-KDE neon
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Cinnamon Remix iya kukhupha ingxelo "epheleleyo" ekuqaleni kuka-2020, kodwa sinokuyivavanya kwangoko.
Ndiyayithanda idesktop yeCinnamon kwaye nangona kwiLinux Mint isebenza kakuhle kwaye ayiniki naziphi na iimpazamo, ayizukuba nzima ukuyizama ngqo ku-Ubuntu ngaphandle kokufaka iPPA kwaye ngqo kwiLinux Mint Base,… .. Kulungile abafana abavela ku-Ubuntu, ukuze baqhubeke nokukhulisa usapho
I-WSL: indlela yokuphucula Ubuntu kwiWindows kwiDisco Dingo
I-Kodi 18.4 ngoku iyafumaneka, yazi uphuculo lwayo